Izindaba - Isimiso sesokhethi engangeni manzi: Ungasifaka kanjani isokhethi engangeni manzi
Umgomo wesokhethi engangeni manzi: Ungasifaka kanjani isokhethi engangeni manzi
Isokhethi elingangeni manzi liyipulagi elinamanzi angenawo amanzi, futhi linganikeza ukuxhumana okuphephile nokwethembekile kukagesi nezimpawu. Isibonelo: amalambu emigwaqo e-LED, amandla e-LED drive, izikrini zokubonisa ze-LED, izibani zokukhanya, imikhumbi yokuhamba ngezikebhe, imishini yezimboni, imishini yokuxhumana, imishini yokuthola, amaplaza ezentengiselwano, imigwaqo emikhulu, izindonga zangaphandle ze-villa, izingadi, amapaki, njll., Konke kudingeka kungasebenzisi manzi izisekelo. Uyazi-ke ukuthi uyini umgomo wesokhethi engangeni manzi? Uyazi ukuthi ungafaka kanjani isokhethi engangeni manzi?
Isingeniso esifushane sesokhethi engangeni manzi
Isokhethi elingangeni manzi aliyona nje ipulagi elinokusebenza okungangenwa ngamanzi, kodwa futhi lihlinzeka ngoxhumano oluphephile noluthembekile lukagesi nezimpawu. Isibonelo: amalambu emigwaqo e-LED, amandla e-LED drive, izikrini zokubonisa ze-LED, izibani zokukhanya, imikhumbi yokuhamba ngezikebhe, imishini yezimboni, imishini yokuxhumana, imishini yokuthola, amaplaza ezentengiselwano, imigwaqo emikhulu, izindonga zangaphandle ze-villa, izingadi, amapaki, njll., Konke kudingeka kungasebenzisi manzi izisekelo.
Kunezinhlobo eziningi nezinhlobo zamasokhethi angenawo amanzi emakethe, kufaka phakathi amasokhethi wendabuko angenamanzi empilo yasekhaya, njengamaplagi angunxantathu, njll., Angabizwa ngokuthi amasokhethi, kepha ngokuvamile awavimbi amanzi. Ngakho-ke ungasinquma kanjani isokhethi engenawo amanzi, isilinganiso sokungena manzi yi-IP, izinga lamanje eliphakeme kakhulu lokungena manzi yi-IP68, njengamanje kunabakhiqizi abaningi basekhaya bamapulagi angenawo amanzi, kepha zimbalwa izikhoxe zangempela zezimboni nezasendlini, futhi amapulagi kagesi asendlini awakwazi ukuba kusetshenziswe kabi kakhulu.
Isokhethi yasendlini engangeni manzi, i-220V 10A plug-plug, ipulagi enamapulaki amabili ingasetshenziswa endaweni engavikelekile ukuhlangabezana nekhaya. (Izinga lokuvikelwa i-IP66 lingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zemindeni. I-IP66 ifuthwe ngodlame kuzo zonke izinkomba ngaphandle kokungena kwamanzi, ifakwe kwimitha elilodwa lamanzi ngehora elilodwa ngaphandle kokungena kwamanzi.) Kumele kuqashelwe ukuthi amasokhethi angaphandle ngokuvamile ayizinto zePC, ngakho ukuguga kufanele kubhekwe.
Isokhethi elingangeni manzi ibhokisi elingenawo amanzi elinekhava engezwe ngaphandle kwesokhethi esijwayelekile sodonga. Ibhokisi lixhumana nodonga ngomcamelo wenjoloba, ngakho-ke lingavimba amanzi; ezinye izikhoxe ezingangeni manzi zenziwa ngejazi lepulasitiki elingangenisi imvula, ngesiqu sangaphakathi Okulandelayo, sisekela isikulufa esikhethekile. Kunezintambo ezine ezinezigaba ezintathu, izintambo ezintathu ezixhasa izintambo ezisekela i-skewer ne-skewer.
Okokuqala susa isokhethi, bese ufaka ikhava engenamanzi ngemuva kwesokhethi, bese uxhuma ucingo kusixhumi esibonakalayo sesokhethi ngokuya kwe-polarity (ucingo lomlilo kuye kusixhumi se-L, ucingo lwe-zero ku-N interface, kanye nocingo lomhlabathi ku-E interface). Qinisa izikulufu zokuqinisa, kungcono ukubeka izikulufo zokulungisa isokhethi odongeni.
Ukufakwa kwesokhethi okungangeni manzi
Indlu yokugezela iyindawo emanzi kakhulu ekhaya, futhi indawo okuthengwa kuyo ijwayele ukuthela amanzi, ngakho-ke kufanele unake ngokukhethekile ukukhethwa nokufakwa kwendawo yokuphuma endlini yokugezela:
1. Lapho ufaka isokhethi lendlu yokugezela, kufanele ifakwe phezulu ngangokunokwenzeka, kude nesiphetho noma idivaysi yokuphuma kwamanzi.
2. Isokhethi lendlu yokugezela kufanele livikelwe ngesembozo esivikelayo. Khetha iswishi ngefilimu evikela ipulasitiki.
3. Lapho uthenga isokhethi, hlola ukuthi isiqeshana sesokhethi siqine ngokwanele yini, amandla okufaka anele, futhi isiqeshana sesokhethi kufanele siqine. Isakhiwo sesiqeshana sesokhethi samanje ikakhulukazi sisebenzisa indlela eqinile ye-extrusion, ngakho-ke amandla okuluma phakathi kwe-plug nesiqeshana andisiwe kakhulu, futhi nesimangaliso sokukhiqizwa kokushisa ngesikhathi sokusebenzisa isikhathi eside kuyagwenywa. Ngasikhathi sinye, i-extrusion eqinile yenza ukuthi ipulaki kungabi lula ukuwa, okusebenza ngempumelelo Kunciphise ukuphuma kukagesi okubangelwa izinto zabantu.
4. Uma usebenzisa, qiniseka ukuthi izandla zakho zomile, futhi ungasebenzisi amaswishi namasokhethi ngamanzi.
5. Lawula ngokuqinile ikhwalithi yamasokisi amaswishi, imikhiqizo ethengwe yibo ayifanelekile, noma ngabe abantu basebenzisa ugesi ngokuphepha, kunengozi efihlekile yokuvuza.
Ukufakwa kwangaphandle kwesokhethi okungangeni manzi
Ukuze kube lula ukukhanyisa ekhaya, abantu abaningi futhi bafaka amasokhethi ngaphandle, njengamabhalkhoni, amadokodo egceke, njll. Ngaphandle ngenxa yemvula nezinye izizathu, ngakho-ke ukukhetha amasokhethi kufanele kunake kakhulu:
1. Isokhethi kufanele lifakwe endaweni efihliwe lapho imvula ingenakufinyelela khona.
2. Khetha isokhethi engangeni manzi enekhwalithi engcono. Izinga lesokhethi elingangeni manzi alilihle. Izingozi zokuphepha zinkulu uma zisetshenziselwa isimo sezulu esimanzi ngaphandle.
3. Sika amandla angaphandle ngamandla ngangokunokwenzeka ngezinsuku zemvula ukugwema ukudala ezinye izingozi, futhi uzame ukungasondeli ezindaweni ezinamandla kagesi ngangokunokwenzeka.
4. Amasokhethi angaphandle awangenwa ngamanzi, awavikeli uthuli futhi alwa nokuguga, ngakho kufanele kusetshenziswe amasokhethi angangeni manzi.
5. Izidingo zezinga lokuvikela lamaplagi angaphandle namasokhethi ziphakeme ngokwedlulele, kunconywa ukuthi ukhethe i-IP55 noma ngaphezulu.
Isikhathi Iposi: Apr-28-2020